Mararka qaarkood, Haddii aad u maleyneyso in muuqaalkaaga lebiska ee bannaanka uu yahay mid aad u fudud, waxaad u diyaarin kartaa dabool baseball qaab isboorti oo caadi ah. Waxay kaa caawin doontaa qaabkaaga. Uma baahna waxyaabo aad u tiro yar si loo qurxiyo, koofiyadda baseball-ka waxay ka dhigi kartaa qaabkaaga mid caadi ah oo qurux badan, laakiin waa maxay ...
Waa macquul in gabdho badani ay jecel yihiin koofiyadaha fidsan, maxaa yeelay iyada oo la xidho, si kasta oo aad caadi u tahayba, waxaa lagugu calaamadin doonaa "fashionista". Haddaba su’aashu waxay tahay, waa maxay waxa ugu fiican ee loo maro si loo xidho qaflad fidsan oo si fiican u muuqda? Waa maxay koofiyadaha fidsan? Waa maxay qaabka wejiga ku habboon ...
Sida loo doorto dharka koofiyadaha
Marka hore aan ka hadalno koofiyadaha jilicsan ee jilicsan, waxaa jira dhowr si caadi ah loo isticmaalo. Badanaa dhar kasta wuxuu leeyahay tirinta dunta iyo cufnaanta. Tirinta dunta ayaa loola jeedaa dhumucda dunta tolmo wanaagsan leh. Cufnaanta: Waa waxa ku jira tirinta dunta ee aag kasta, guud ahaan 4 inji oo laba jibbaaran. Markay tiradu badato ...
Waa maxay koofiyadaha ugu wanaagsan dumarka
Dharka, dharka noocuu doono ha noqdee, koofiyaddu waa habka ugu fudud ee isla markaaba lagugu qurxin karo. Marka noocyada koofiyadaha aad yeelan karto? Haweenka jecel inay labistaan, kuwani waa xulashooyinka moodada iyo kuwa aan waqtigooda dhaafin, kuwaas oo ah xulashooyin xigmad leh Si kastaba ha noqotee, haddii aadan wax badan ka ogeyn koofiyadaha, noocyada ...
Halyeey hal-qarni ah, filimkii 1935 oo isku magac ah, ”halyeeyga koofiyad sare leh, filimka fred astaire isagoo xiran sawirka koofiyadda Fedora iyo tallaabooyinka qoob-ka-ciyaarka ee xarrago leh ayaa saameyn ku yeeshay soo-saarista jiilalka heesaha iyo filimada qoob-ka-ciyaarka, iyo is-dhexgalka koofiyadda sare naqshadeynta boodhka filimku waa mid cajiib ah. T ...
Asalka Koofiyadaha ee Shiinaha
Xilliga jiilaalka, dadku badanaa waxay xirtaan koofiyado si looga hortago qabowga iyo inay diirimaad yeeshaan. Laakiin markii dadku bilaabeen inay adeegsadaan koofiyadaha, ma ahayn inay diirimaad yeeshaan, laakiin waxay u isticmaali jireen inay ku qurxiyaan. Koofiyad ayaa lagu soo hindisay dalkeena goor hore, sarbeebta "dhawaq sare" "taaj", "taaj", waxaa loola jeedaa ...